Myat Shu - Myat Shu eZine
You are here : Myat Shu » Archives for Myat Shu eZine
Published By Myat Shu On Wednesday, January 1st 2014. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, သူတို့အာဘော်
အမ၀မ်းကွဲရဲ့ အိမ်မှာ ခဏတဖြုတ် ရောက်နေတုန်း ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာတယ်။ ဧည့်သည် လင်မယားမှာ ၄ နှစ်သား အရွယ် သားကလေးတယောက် ပါလာတော့ ၊ သူတို့ မိတ်ဆွေချင်းတွေ စကားအေးဆေးဆေးဆေး ပြောပါစေတော့ဆိုပြီး ၊ ကလေးလေးကို ခြံနောက်ဖက်မှာ ဆော့ဖို့ ခေါ်သွားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်လည်း မဟုတ်တော့ ဘယ်ပစ္စည်း ဘယ်နေရာ ရှိမှန်းမသိ ကစားစရာ ဘာပေးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတုန်း ၊ ဘောလုံးလေး တလုံးကို ကံအားလျော်စွာ မြင်လိုက်တယ်။ ကလေးလေးဆီ ပစ်ပေးလိုက်ရင်း ၊ Kick the ball လို့ ၀မ်းသာအားရ ပြောလိုက်တယ်။ ကလေးလေးက.. ဘောလုံးလေးကို ပြန်မကန်ပဲ ဖမ်းကိုင်ထားတယ်။ သူ့မျက်နှာသေးသေးလေး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, December 28th 2013. Under Myat Shu eZine, သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်, ဆောင်းပါး
“ဗမာစစ်သည်… ကမ္ဘာစစ်သည်… ရာဇာဖြစ်အောင်ကြံမည်… တို့ဗမာအရေးအားပေးခဲ့သည်… ဝေဟင်တပ်မတော်… ရေယာဉ်တပ်မတော်… ခြေလျင်တပ်မတော်ပါစုံညီ… တကယ့်စစ်သား စွမ်းအားပြမည်…” ဤကား ၁၉၄၃ ခုနှစ်က ကန်တော်ကြီးစောင်း “မြိုင်” ပြဇာတ်ရုံတွင် ကပြခဲ့သော “ဤစစ်ကြီးမှာ” ပြဖာတ်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုတွင် ပြဇာတ်မင်းသား “ကျော်ဝင်း” သီဆိုခဲ့သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နှင့် ဂျပန်တပ်မတော်တို့ ပူးပေါင်းကာ ဗြိတိသျှတို့ကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ တိုက်ထုတ်ဆဲကာလကို နောက်ခံထားကာ ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားသည့် ဒါရိုက်တာဆရာခန့်၏ “ဤစစ်ကြီးမှာ”ပြဇာတ်ကို အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် မအားလပ်သည့်ကြားက အားပေးခဲ့ရုံသာမက ပြဇာတ်မင်းသားကျော်ဝင်း၏ စစ်သားအသွင်သရုပ်ဆောင်ပုံ၊ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး မြေအောက်တော်လှန်ရေးသမားအဖြစ် နယ်ချဲ့တို့အား တိုက်ခိုက်ပုံပြကွက်များကို လွန်စွာနှစ်ခြိုက်သဘောကျခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် ပြဇာတ်မင်းသားကျော်ဝင်းက စစ်သားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီး ရန်သူများနှင့် ဓားခုတ်ခန်းကို ပိုင်နိုင်စွာပြသသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဇာတ်ခုံပေါ်တက်လာပြီး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, December 16th 2013. Under Myat Shu eZine, စကားပြေလက်ရာသန့်, မျက်ရှု, ရသ, အက်ဆေး
တင်မိုး - သင်္ချိုင်းကုန်းမှာ ငါတို့ ရွာကလေး၏ မြောက်ဘက်တွင် သင်္ချိုင်းကုန်း ရှိသည်။ မသေကြသေးသော သူတို့သည် ရွာကလေးထဲတွင် ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်နှင့် တသီးတခြား နေထိုင်ကြသည်။ ထန်းရွက်တဲကလေးမှာလည်း နေထိုင်ကြသည်။ သက်ငယ်မိုး ထရံကာနှင့် နေကြသူတို့လည်း ရှိသည်။ အချို့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတို့သည် သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့် နေကြသည်။ သေဆုံးကြသော အခါတွင် သင်္ချိုင်းမြေတွင် တစုတဝေး နေကြရတော့သည်။ သင်္ချိုင်းကုန်းသည် နေရာ မကျယ်လှ။ သို့ရာတွင် ကွယ်လွန်သူ မှန်သမျှတို့၏ တစ်ခုတည်းသော နေအိမ် ဖြစ်လေသည်။ သင်္ချိုင်းကုန်းဆီသို့ လှမ်းကြည့်ပါ။ မန်ကျည်းပင်အိုကြီး သုံးလေးပင်သည် ခါးတံရှည်ကြီးနှင့် ရပ်နေကြသည်။ တန်ဆောင်းပြသာဒ်ပင်များသည် ချုံဖွဲ့၍ နေကြသည်။ ညောင်ပင်ကြီး တစ်ပင်သည်လည်း မုတ်ဆိတ်ဖွားဖွားနှင့် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, December 10th 2013. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, ရသ, အက်ဆေး
“အဲဒီတဲကလေးထဲ အမေလဲလျောင်းနေပေါ့…။ အမေ… ကျွန်တော်ရောက်လာပြီအမေ အမေ… ကျွန်တော့်ကို ထပြီး နှုတ်ဆက်ပါဦးအမေ အမေ့ခြေအစုံကို ပွေ့ဖက် အသံမထွက်ဘဲ ကျွန်တော်ငိုတယ်။ ထန်းပင်မြင့်မြင့်ကြီးပေါ်က ရွက်ဟောင်းခြောက်တွေ တရှဲရှဲမြည်လို့….။” (ပိုင်စိုးဝေ) ဆောင်းရဲ့ည။ ခရစ္စမတ်အကြိုညမို့ အပြင်မှာ နှင်းတွေ ရှိနေလိမ့်မည်။ အမေကတော့ ဆောင်းကိုလည်း မသိ။ နောက်ဆုံး ထွက်သက်ကလေးကိုတောင် သတိနှင့် ရှုမှတ်သွားနိုင်ခဲ့ရဲ့လားမသိ။ ဆေးစိမ်းရောင်တွေ မွဲသွေ့နေသော အိမ်ခန်းကလေးထဲက ခုတင်ဟောင်းလေးပေါ်မှာ လေးလံသော သတ္တုတုံးတစ်တုံးလို ရှိနေလေသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်တုန်းကလည်း သည်ခုတင်ကလေးပေါ်မှာပဲ အဖေဆုံးခဲ့သည်။ အခုလည်း သည်ခုတင်လေးပေါ်မှာပဲ အမေဆုံးလေသည်။ ခေါက်၍ သိမ်း၍ရသော သည်သံခုတင်လေးကလည်း အမေနှင့် အဖေ၏ “အိမ်ထောင်ဦးအမှတ်တရ” ပစ္စည်းလေးမှန်း ကျွန်တော်သိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ အမေကိုယ်တိုင် စုတ်တံဟောင်းကလေးနှင့် ပန်းချီဆရာမတစ်ယောက် ပတ္တူဖျင်တွေကို ဆေးသုတ်နေသလို သုတ်နေတတ်သည်။ သည်ခုတင်လေးက သင်္ဘောဆေးရသည့်အပေါ် မူတည်ကာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, August 21st 2013. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, ရသ, အက်ဆေး
ခရီးထွက်ခြင်းကို သူ ၀ါသနာထုံသလော သူ ကိုယ်တိုင် မသိ။ သိအောင်လည်း တစ်ခါမျှ မဆင်ခြင်ခဲ့ဘူး။ ဆင်ခြင်ရန်လည်း အချိန်မပေးနိုင်။ စင်စစ် အချိန် မပေးနိုင်ဆိုသည်မှာ ဆင်ခြင်စဉ်းစားရန် ၀န်လေးသည်ကို အကြောင်းပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ခြေထောက်တွင် ဗွေပေါက်သူ သူ့အဖို့ ခရီး မကြာခဏ ထွက်ရသည့် အလုပ်ဌာနတွင် သက်ဆိုးရှည်ခွင့်ရသည်မှာ ကြီးစွာသော ဆုလာဘ် ဖြစ်၏။ ခရီးစရိတ် မကုန်ဘဲ ဒေသန္တရ၊ ဘာသန္တရ ဗဟုသုတတို့ကို ကြားသိခွင့် ရသည့် အပြင် ဒေသထွက် ထန်းရည်၊ ဓနိရည်၊ ဆန်အရက်၊ ပြောင်းအရက် အစရှိသည့် အရက် အမျိုးမျိုးကို ယုန်၊ လိပ်၊ ဖွတ်၊ ပုတတ်၊ ကြောင်သား၊ မျောက်ချေးခါး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, August 10th 2013. Under Myat Shu eZine, ကဗျာ, မျက်ရှု, ရသ
Photo: Maung Ne Lynn Aung ငါတို့ဟာ ... အဆုံးထိဖိထားခံရတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆွဲထူနေရင်း အတောင်အလက်စုံပါလျက်နဲ့ ပျံခွင့်မရတဲ့သူတွေ ငါတို့ဟာ ... ကိုယ်ပေးမထားတဲ့ကတိတွေ တည်အောင်ကြိုးစားရင်း ရှေ့ကဦးဆောင်နေတဲ့ နောက်ကျကျန်နေသူတွေ ငါတို့ဟာ ... ကိုယ့်အတွက် အနိုင်ဆိုတာ မရှိတဲ့ပွဲကိုတောင် မစခင်က ရှုံးနှင့်ထားသူတွေ တကယ်တော့ ငါတို့ဟာ မွေးဖွားမလာခင်ကတည်းက အဆိပ်သင့်ခဲ့တဲ့ စနစ်ဆိုးရဲ့သားကောင်တွေ ..... ။ ယုပမ် (သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၁၃) ... Continue Reading